Sargaal Sare oo Si Faahfaahsan uga Faalooday Gabood Falyada ka Dhaca DDSI – Xeernews24
Sargaal Sare oo Si Faahfaahsan uga Faalooday Gabood Falyada ka Dhaca DDSI
26. Dezember 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Laanta afka Amxaariga ee idaacada VOA-da ayaa wareysi dheer oo ku saabsan ismaamulka Soomaalida sii deysay. Wareysiga oo laga qaaday shaalaqe Cali Samire Sigad ayaa aad u dheeraa islamarkaana taabtay gabood-falyo xoog leh oo sarkaalku ku nuuxnuusaday inay ka dhaceen DDSI. Waxaa aan halkan ku soo koobaynaa qaybihii ugu muhiimsanaa wareysiga. hoosna waxaad ka dhageysan kartaa wareysigii oo dhamays-tiran.
Cali waxa uu ku dhsahay islamarkaana ku barbaaray degmada Dirdhabe halkaas oo uu waxbarashadiisa ku qaatay. Waxaa kale oo waxbarasho sare oo iyo tababar la xidhiidha booliska federaalka ah ee dalka uu ku qaatay Addis Ababa. Sigad ayaa muddo 11-sano ah ka soo shaqeeyey degmada Dirdhabe isaga oo xilal kala duwan ka qabtay booliska federaalka ah. Waxa uu noqday madaxa hay’ada dambi-baadhista iyo taliyaha xarunta booliska ee Diridhabe.
Cali Sigad ayaa xusay in uu dalka ka soo cararay markii uu u adkeysan waayey dulmiga lagu hayo bulshada Soomaalida ah iyo markii naftiisu khatar gashay. Cali ayaa si gaar ah u taabtay sida uuna raaliga uga ahayn colaada Itoobiya dhax-dhigtay Soomaalida iyo Canfarta. Waxa uu sheegay in dad uu ku jiro ay soo bandhigeen in khilaafka dhanka dhulka ah, ee dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta, si dhaqan ah loo xaliyo. Waxa la soo jeediyey in ugaaska beesha Ciise iyo suldaanka Canfartu hawsha dhaxgalaan.
Shalaaqe Sigad ayaa si gaar ah u eedeyey madaxweyne, Cabdi Maxamuud Cumar, iyo ku-xigeenkiisa C/xakiim Cigaal oo ka soo jeeda soonka Shiniile. Labadan masuul ayuu ku sheegay inay fulinayaan hawsha EPRDF islamarkaana khatar u arkeen qorshihii sarkaalka iyo dadka la midka ahi ay xalka ku baadi-goobayeen.
Inkastoo Cali sheegay inay khalad tahay in khayraadka dalka la baadho iyada oo aan lala tashan dadweynaha, waxa uu dhanka kale xusay in dadka tacadiyada loo geystay ayna badankoodu wax shaqo ah ku lahayn jabhada ONLF.
Sarkaalka ayaa xukuumada EPRDF ku eedeyey inay dalka ku xukunto siyaasada ah qaybi oo xukun. Waxaa uu tusaale u soo qaatay in dawladu ka shaqaynayso isku dhaca qoomiayadaha Oromada, Soomaalida, Canfrta iyo Axmaarada.
Masuulka ayaa DDSI ku tilmaamay xabsi weyn korka ka banaan, isaga oo si gaar ah jeel Ogaadeen ugu sheegay ‘jahanabo’ ama cadaab.
Idaacada ayaa nasiib u heshay inay eedeymaha DDSI loo soo jeediyey ka wareysato wasiirka warfaafinta ee Itoobiya- Lencho. Madaxa xidhhidhka ee Itoobiya ayaa si kooban u sheegay in xogaha uu hayaa tilmaamayaan in xaalada DDSI ka soo raynayso isaga oo tusaale u soo qaatay horumarka laga gaadhay dhanka biyaha. Waxaa kale oo uu sheegay in hadii wax dhibaato ahi jirto daraasad lagu samaynayo islamarkaana xal loo raadinayo. Lencho ayaa xusay inay dadweynuhu aad u ixtiraamaan dawlada gobolka.
Waxaa sheegid mudan, in dad badan oo lid ku ah siyaasada DDSI ay fursad u helaan inay ka hadlaan warbaahinta xorta ah iyo ta mucaaradka oo loo jeediyo dadka ku dhaqan Itoobiya. Fursadaha warbaahinta ee kooxahan helaan ayaa culays ku noqon karta madaxda DDSI oo laga yaabo in xilligan ay ka baaran-dagayaan sidii looga gaashaman lahaa.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/cali-sigad.jpg 188 336 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-26 11:53:002016-12-26 11:53:53Sargaal Sare oo Si Faahfaahsan uga Faalooday Gabood Falyada ka Dhaca DDSI
The UAE expands military presence in the Horn of Africa Daawo mashaariicda Harumarineed iyo Miisaaniyada 2017 oo Hal Mashruuc lagu soo...